» नारायणीमा फागुनदेखि पानी जहाज चल्ने: अनलाइन बुकिङ खुला
नारायणीमा फागुनदेखि पानी जहाज चल्ने: अनलाइन बुकिङ खुला
२६ माघ २०७६, आईतवार १७:५२
नारायणी नदीमा आगामी फागुन महिनादेखि क्रुजसीप (सानो पानीजहाज) सञ्चालनमा आउने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा क्रुजसीप निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै यहाँ जहाज निर्माण शुरुआत भएको थियो ।
क्रुजसीप निर्माण गर्दै गरेको राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार पानीजहाजसम्बन्धी उद्योग दर्ताको प्रावधान नभएकाले काममा केही ढिलाइ भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग दर्ता गर्न पाउने निर्णय गरेसँगै अगामी महिनादेखि सानो जहाज सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, “बाहिरको एसीपी लगाउन र सिसा राख्न बाँकी छ, केही दिनमा काम सक्छौँ ।”
उनले १० दिनभित्र अनलाइन बुकिङ आह्वान गर्ने जानकारी समेत दिए । क्रुजसीपमा बिहानी खाना (ब्रेकफाष्ट क्रुज), दिवा खाना (लन्च क्रुज) र रात्रिकालीन खाना (डिनर क्रुज)का लागि अनलाइन बुकिङ खुला गरिँदैछ ।
बाहिर तयारी खाना क्रुजमा तताएर खुवाउने समेत व्यवस्था मिलाइँदैछ । जहाज भित्र नै गायकको गीतमा पर्यटक रमाउन सक्नेछन् ।
बारहरु रहनेछन् । भुइँतलामा ९० वटा कुर्ची , बीचमा ११० र छतमा २० जना बस्न मिल्ने प्रबन्ध निर्देशक कँडेलले जानकारी दिए । दोस्रोतलाको बाहिर बसेर समेत यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
क्रुजको ब्रेकफास्टमा दुई घण्टाको यात्रा र लञ्च र डिनरमा तीन÷तीन घण्टाको यात्रा गराइनेछ । यात्राका क्रममा काभ्रेघाटबाट शुरु यात्रा देवघाट हुँदै फर्किएर गोलाघाटसम्म बाह्य दृश्य हेरेर यात्रु रमाउन सक्नेछन् । नेपालमा व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको यस प्रकारको क्रुज पहिलो रहेको बताइएको छ ।
ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनसंगै नारायणी नदी छेउमा जहाज निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसको सुरक्षा, सेवाग्राहीको सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान दिँदै विशेष सावधानीका साथ क्रुज निर्माण र पूर्व तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
क्रुजसीपको सञ्चालनका लागि आवश्यक तीन जना क्रिउ मेम्बर र प्राविधिक हाललाई विदेशी रहेका छन् । दीर्घकालीनरूपमा नेपाली जनशक्ति नै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक तालीम केन्द्र सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।
क्रुजको निर्माण भारतीय कम्पनी ग्रान्डडुर मारिन इन्टरनेशनलले गरेको हो । क्रुजमा दुई इञ्जिन रहेका छन् । क्रुजको गति प्रतिघण्टा ३५ किलोमिटर हुनेछ । क्रुज निर्माण गत वर्षको चैतबाट थालिएको हो । क्रुज निर्माणका लागि रु १५ करोड हाराहारी खर्च भएको जनाइएको छ । रासस
ओलीले भने: पार्टीमा अन्तर्घात देखियो गम्भिर समिक्षा हुन्छ
पाँच सचिवको सरुवा
मतगणना नसकिदै काठमाडौंको मेयरमा बालेन र उपमेयरमा सुनिता विजयी
बसको ठक्करबाट प्रहरीसहित दुई जनाको मृत्यु
हेटौंडा उपमहानगरमा भ्रष्ट्राचारको गन्ध: खरीद ऐन विपरित लाखौको फर्निचर खरिद
पोखरामा समाजवादीका आचार्य निर्वाचित
हेटौँडा सिमेन्टले ३८ हजार कामदार माग्यो
गृह जिल्लामा विरोध खतिवडाको पुत्ला जलाईयो
हेटौंडामा भोलिबाट मिनी लकडाउन
हेटौंडाबाट अक्सिमिटर कालोबजारी गर्ने २ जना पक्राऊ
चौघडामा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
हेटौंडा मल्टिमिडिया प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित
बागमती प्रदेश, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय
दर्ता नं.: ००००२
कार्यालय: हेटौंडा, मकवानपुर, नेपाल
सम्पर्क नं.: +९७७-९८५-५०७०३२७
© 2014-2021 Hetauda Multimedia Pvt. Ltd. All Rights Reserved